Mana isan’andro – Sabotsy 18 Jolay 2015 – Athis Fanantenana
Mana isan’andro – Sabotsy 18 Jolay 2015
EZEKIELA 46. 11-24 F. 3
Ny amin’ireo fanatitra
Ny fanatitra ho mariky ny fifandraisana amin’Andriamanitra dia mitohy tahaka ny taloha ho an’ny olona rehetra sy ho an’ny Mpanjaka. Ny mampiavaka azy amin’ireo tamin’ny andron’i Mosesy eto dia ny tsy fisian’ny fanatitra amin’ny hariva intsony. Toa maneho izany fa hitsahatra ny aizina fa ho mazava maharitra no miandry ireo olon’Andriamanitra amin’ny fotoana hiverenan’ny olona Aminy.
Mpitondra tia an’Andriamanitra sy marina.
Efa mila ho tahaka ny an’ny mpisorona mihitsy ny fahafahan’ny mpanjaka mampiasa ny toerana masina. Ny andraikitra no tsy mitovy fa azo sokafana manokana ho azy koa ny vavahady. Mila manana fifandraisana manokana amin’Andriamanitra ny mpitondra. Izany no hanampy azy hananany toetra sy fifehezantena tsy hanararaotra sy hanampatra ny fahefany amin’ny vahoaka. Ilay lalàna momba ny lova sy ny fanomezana ity (16-18) dia fitandrovana ny tsy hitaran’ny tsy fitoviana eo amin’ny fiaraha-monina. Andraikitry ny tsirairay voalohany ny mikolokolo sy mitrandraka izay nomen’Andriamanitra azy avy, ary ny andraikiny faharoa dia ny manampy ny hafa koa mba ho tahaka izany.
Afaka manatona an’Andriamanitra ny rehetra.
Ao amin’ity tempoly vaovao hisian’ny fifandraisana tsara amin’Andriamanitra ity dia hisy fanatitra maro haterina ho Azy. Ny zorony efatra misy fahandroana dia mampiseho fa afaka mikarakara fanatitra maro kokoa ny mpisorona, avy amin’ny vahoaka rehetra. Famantarana ny fifohazam-panahy marina ny fahazotoana manolotena ho an’Andriamanitra sy manome ho fampandrosoana ny asany.
Any am-pahababoana ny zanak’Israely no nomen’Andriamanitra izao teny izao. Misy hoavy tena tsara azo antenaina saingy ny fanekena hiaraka marina amin’Andriamanitra ihany no hahazoana izany.
Ezekiela 44. 4
Teny mivohitra: Fifohazam-panahy
Mofon'aina - Sabotsy 18…